Lyusya Ukusineka - umsakazo aphethe "Isiliva Rain": Biography, igama langempela, amaqiniso athakazelisayo
Izindaba Umphakathi, Journalism
Isiteshi somsakazo "imvula Silver", eyasungulwa ngo-1995 eMoscow, ithandwa kakhulu phakathi kwabanye. I ezingomeni zomculo okusemathinini ugxile idwala, kokubili Russian angaphandle, futhi isiqondiso, ngokuthi pop. Radio "imvula Isiliva" ukusakazwa ubusuku nemini ukuze abangaphezu kwesigidi zezilaleli yalo evamile, futhi lokho kulungile eziningi ezimweni wokuncintisana ezinzima. Phakathi izinhlelo ulwazi olubalulekile babe futhi ukuzijabulisa esidalelwe yokuchitha isizungu bokusungula. Babe are isici esiyinhloko ukusakaza, okuyiwona lenqwaba abantu bakhethe esivuna lokhu.
"Imvula Isiliva" uvame ukubizwa ngokuthi umsakazo, yasungulwa abantu smart. ukuqhathanisa okunjalo akukhona ngephutha, ngoba abantu abaningi abafundile futhi ezithakazelisayo babephakathi DJs yayo kanye abethuli. Engingakusho nje kokukhumbula: Aleksandra Gordona uTina Kandelaki, u-Oskar Kuchera, uVladimir Solovyov, Stasa Sadalskogo, Lyusyu Ukusineka, nabanye abaningi. Namuhla sizogxila intombazane zokugcina ezibalwe ngubani idume isethulo yayo yasekuqaleni kolwazi, amazwi okuhlabayo, futhi ngokuvamile kuyinto ubuntu engavamile futhi okungavamile.
Yini mayelana aphethe ethandwa laziwe?
Kunengqondo, Lyusya Ukusineka - Bonisa ubuntu ethandwa, okufanele izinto eziningi siyazi. Nokho, akunjalo. Lonke ulwazi iyatholakala mayelana intombazane - it is kuphela sithathwa emongweni ayebatshele zona yakhe baxoxa kanye ethers. Ngokwesibonelo, ake wathi ukuthi wazalwa Juni 22, 1982 emndenini encane abavamile Soviet is akuhlukile abanye.
Ethola iziqu semfundo ephakeme bebheke journalism. Isebenza umsakazo "imvula Isiliva" cishe kusukela buqala, ie kusukela ngo-1995. Ngokusekelwe yokuthi amaqiniso eziphathelene yomlando wakhe, Lyusya Ukusineka lihlukaniswe emadolonzima, kumele kuphetfwe ukuthi intombazane akafuni ukuvumela abantu bangaphandle empilweni siqu, ngokucacile umngcele phakathi umsebenzi futhi yini ingeyona ke.
Amaqiniso ethakazelisayo intombazane ongaqondakali
Naphezu kwazo zonke lezo ekusithekeni imfihlakalo Lyusi Ukusineka, ngaye futhi ukuphila kwakhe namanje wafunda amanye amaqiniso athakazelisayo. Ngokwesibonelo:
Intombazane - a Bhema kakhulu futhi ikhofi ophuzayo. Izwi lakhe ezijulile - kuwumphumela ukukhuthazwa eside yomkhuba wawo.
Lyusya Ukusineka, ogama lakhe langempela Julia, kuyaqapheleka ukuthi ngokwemvelo ungumuntu ukuvilapha kakhulu. Ngokusho kwakhe, nxazonke kufanele basebenze, futhi injongo yayo emhlabeni kungenye. Mhlawumbe yingakho yena uluthando ekhethekile odume ngempelasonto nokunwetshiwe ukuthi wayesekhawulile ukusebenzisa kusukela ngoLwesine kuya ngoMsombuluko.
Lucy angizange sengihlale isikhathi eside endaweni eyodwa. Yena bebephila ukuphila ayimizulane, ephumula kuphi for lungene ezintathu kwezine. Bekusebantwini iphuzu, kuze intombazane wahlangana uthando impilo (futhi ngokuvumelana Green kakhulu). Wayebe uhambo emhlabeni wonke. It lilandela elinye iqiniso owaziwa ngokuphila Lyusi Grin.
Intombazane - umsakazo aphethe ezizimele, okungukuthi, umuntu owenza ukude. Green ubhala ukudluliselwa ukukhanya kube komunye umkhawulo womhlaba, bese kuya ku-intanethi uthumela izinhlelo ngomumo eyenziwe ngqo isiteshi somsakazo "imvula Isiliva".
Into yokugcina ohlwini amaqiniso athakazelisayo ngokuphathelene oluyimfihlakalo umsakazo umethuli we esiteshini ethandwa "Isiliva imvula", mhlawumbe kuyafaneleka wokuzilibazisa ongaziwa eyolanda Lyusi Ukusineka Street kulahliwe amathoyizi eliphukile noma ukulungisa kubo.
Umbuzo ukuthi uMongameli Russian Federation
Lyusi Ukusineka ubheka ukuphila ngempela ngokugqamile, akusho ukuthi kwezinye izikhathi impela ethusayo. Ngokwesibonelo, isifuna uhulumeni waseRussia ukuba livumele ngokomthetho ngomzimba nensangu ukubhema. Esithangamini sabezindaba uMongameli Russia V. Putina Greene bambuza umbuzo mayelana ngenhla. Nokho, indlela abantu abasabela ngayo umongameli Russian wawucacile futhi kwaba categorical "akekho."
Lyusya Ukusineka yakhuphuka nale ukudluliswa, ngokuyisisekelo elisemandleni iqiniso lokuthi isikhathi esifushane (4 amaminithi), le ntombazane ithi futhi uzwakalisa umbono wakhe maqondana nezinye izinhlelo kanye yaso isiteshi somsakazo okuholela "imvula Isiliva". Futhi, engawuboni wakhohlwa ukusho le izingcingo zezilaleli, wayebonakala le engenangqondo kakhulu.
Kuwufanele ethi umninikhaya umsakazo nge ulimi abukhali. Kusukela akuve akuvamile ukuzwa amazwi esikhuthazo, futhi ukubingelela ovamile, okuyinto "Sawubona", kubonakala sengathi into Amazing, hhayi ijezi nge ukugxekwa endleleni, ukuba agqoke intombazane.
Ohlelweni kombhali "Hlehlisa" ngezinye izikhathi Lyusya Ukusineka eveza umbono waKhe phezu izenzakalo zezombusazwe eyenzeke muva ezweni lethu kanye nasemazweni aphesheya. Ngokuvamile, waba yisaga isikhathi eside ukuthi ushiya amazwana kude engathandeki eziphathelene ngokuphelele konke: izwe, abantu abangabanikazi osebenza nabo, kanye nezinye izenzakalo. Nokho, it has abalandeli umxhwele ka Green Point naseduze. Abalandeli ngabomvu ukusakaza nsuku zonke ukulalela umuntu waphinda nasekhulwini yintukuthelo yokulunga radio umethuli.
Uthando owenze ushintsho abasakazi
Eminyakeni emine eyedlule, Lyusya Ukusineka wahlangana umfana ukuthi kwashintsha impilo yakhe. Insizwa ehlala eBelgium, lapho, futhi eshukunyiswa intombazane yena. Manje, cishe ngendlela ayimizulane zokuphila babe izinkumbulo kuphela, futhi anomsindo kwathathelwa indawo kusihlwa ethule phambi TV umoya wokuthi singumkhaya elinokuthula. Ngandlela-thile wavuma ukuthi ukuphila kwakhe kube kancane kuyisicefe, kodwa uthando kuwufanele, futhi ushintshe noma yini yena akahleli.
C Yidla ukubekezelelana eRussia?
Uyini Pulitzer Prize futhi okuyiwona ukhishwa. abawinile esiphawulekayo Pulitzer Prize
EMelika, thina shaqa isayithi izindaba, okuyinto waphika ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu
Indlela yokwenza siqu crossword puzzle yakho?
IsiZulu Izindaba City Mariupol
Kuphahlazeka indiza phezu Lake Constance: uhlu izisulu, izithombe
Uju ikhekhe ekhaya: ukupheka iresiphi
Intaba ephakeme kunazo zonke emhlabeni itholakala e-Hawaii
Ngaphambi kokuya esikhathini nezinduna ebusweni bakho: izimbangela, futhi izindlela zokwelapha izincomo odokotela '
Abilisiwe, okuthosiwe, cod kubhakwa. kilojoule
Histology of izinso womuntu
Kuhle abalingisi, abangazange wathola "Oscar"
Uyini spoiler, futhi yini umsebenzi wayo obalulekile?
"Boeing-787" (Boeing 787) - ezibekiweko lobuchwepheshe
Irina Khakamada: Biography of abesifazane yimpumelelo
Alto saxophone - yonke imininingwane
Uyini igesi emsipheni? Usizo lokuqala for igesi elinobuthi
Chalet "Pushkinogorye" - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa